तीज मनाउँदै रानाथारु महिला- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
तीज मनाउँदै रानाथारु महिला
श्रावण ८, २०७७ भवानी भट्ट
कञ्चनपुर — परम्परागत पहिरनमा सजिएर कोही पिङ खेल्दैछन् । केही भान्सामा साँझका लागि पकवानहरु तयार गरिरहेका । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका ५ सिसैयामा राना थारु समुदायका महिलाहरु बिहानैदेखि घर लिपपोत गर्ने र खाना पकाउनेदेखि साउनको डोला (पिङ) खेल्ने काममा व्यस्त देखिन्थे । उनीहरुको यो सबै व्यस्तता तीज मनाउनका लागि भएको हो ।
कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका ५ सिसैयामा साउनको डोला (पिङ) खेल्दै रानाथारु महिलाहरु । तस्बिर : भवानी भट्ट/कान्तिपुर
सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेका रानाथारु समुदायले हरितालिका तीजभन्दा ठीक महिना दिन अगाडि साउन शुक्ल तृतीयाका दिन तीज मनाउने गर्छन् । तीजका दिन महिलाहरु पानीसमेत नखाई ब्रत बस्छन् । उनीहरु बिहानै घर लिपपोतपछि नुहाएर साँझका लागि विभिन्न किसिमका परिकारहरु बनाउने काममा जुट्छन् ।
साँझ साउनको डोला (पिङ) खेलेर नदी वा खोला किनारमा गई पूजा गरिन्छ । नदी किनारमा उरैला (कुशजस्तै एक प्रकारको घाँस) मा गाँठो पारिन्छ । विवाहित महिलाले ७ र अविवाहितले ५ वटा गाँठो पार्ने चलन छ । यसलाई रानाथारु भाषामा ‘झुड्की’ भनिन्छ । उक्त झुड्की चाँदीको औँठीले काटेर खोला वा नदीमै बगाइन्छ । ‘यो पर्वमा दाइभाइ र भतिजाको दीर्घायुका लागि ब्रत बसिन्छ,’ बेदकोट नगरपालिका ५ सिसैकी प्रेमवती रानाले भनिन्, ‘आजको दिन युवतीदेखि वृद्धाहरुसमेत माइती घर जान्छन् ।’
दिनभरि बनाइएका परिकारहरु साँझपख पूजापछि ब्रत बसेका छोरी बहिनीदेखि आफन्तहरु सबै एकै ठाउँ बसेर खान्छन् । यो दिन पुरी, गुलगुला, कतरा, पपरा, सिमहिलगायतका परम्परागत खानेकुराहरु पकाइन्छन् । ‘उहिले हप्ता/दस दिनसम्म तीज मनाइन्थ्यो, तीजकै दिन आउन नसक्ने चेलीबेटीहरु अरु दिन पनि आउथे’, प्रेमवतीले भनिन्, ‘अहिले त्यो चलन हटेर एक दिनमात्रै तीज मनाइन्छ ।’ उनका अनुसार छोरी बहिनीहरु आएको दिन सधैं रानाथारु परिकारहरु पाक्थे । तर केही वर्षयता साउन शुक्ल तृतीयाका दिनमात्रै तीज मनाउने चलन सुरु भएको हो ।
खोला वा नदीमा पूजा गर्नुअघि ब्रतालु महिलाहरु सबै अंगिया र घगरियासहितका थारु पहिरन र गहनामा सजिएर चौर वा नदी किनारमै बनाइएको पिङमा रमाउने गर्छन् । डोला खेल्दा दाइभाइ र भतिजाको दीर्घायुकै लागि गीत गाउने गरिन्छ । ‘यो पर्व भ्रातृत्व प्रेममा आधारित छ’ नेपाल रानाथारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपाराम रानाले भने, ‘राना थारु समुदायमा यो तीजले दिदी बहिनीको दाइभाइ र भतिजाहरुप्रतिको गहिरो सम्बन्ध र प्रेमलाई दर्शाउँछ ।’
उनका अनुसार ब्रतालु महिलाले नदी किनारमा विशेष घाँसमा एकै हातले गाँठो (झुड्की) पारेर चाँदीको औंठीले काट्ने गर्छन् । उक्त झुड्की नदी वा खोलामा बगाइन्छ । नदी जस्तै दाइभाइ र भतिजाको आयु लामो होस् भन्ने कामना गरेपछि घर फर्केर मात्रै खाना खाने चलन छ ।
नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्रै रानाथारु समुदायको बसोबास छ । अध्यक्ष रानाका अनुसार राना थारुको जनसंख्या साढे ३ लाखभन्दा बढी छ ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७७ १८:५६
काठमाडौँ — राम जन्मभूमि अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको छ । त्यसको आधार के हो भन्नेबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले अयोध्याबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति के को आधारमा आएको हो भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भानु जयन्तीका अवसरमा राम नेपाली भएको र उनको जन्मभूमि भारतमा रहेको अयोध्या नक्कली भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने सांसदहरूले बताएका हुन् ।
कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले अयोध्या र ठोरीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा लिन नहुने बताए । उनले ठोरीको अनुसन्धान लागि के व्यवस्था भएको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । ठोरीमा राम जन्मभूमि हो भन्ने यकिन गर्नका लागि कति अनुसन्धान भइरहेको छ ? भन्ने उनको प्रश्न थियो । 'प्रधानमन्त्री ओलीले के आधारमा भन्नुभएको हो ? अहिले अनुसन्धान कुन चरणमा पुगेको छ ? त्यसको विषयमा जानकारी हुनुपर्छ,' उनले भनेका थिए ।
अनुसन्धान र सत्यतथ्य प्रमाणित नभएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि बहस सुरु भएको कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालको भनाइ थियो । 'मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले रामको जन्म नेपालमा भयो भनेपछि अहिले मिडियामा बोल्नेहरू नै विशेषज्ञ जस्तो गरी छलफलमा सहभागि भइरहेका छन्,' उनले भनिन्, 'यस्ता विषयलाई हल्का छलफलको विषय बनाउन हुन्न । नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउन खोज्दा यस्ता विषयवस्तुहरूमाथि सरकार प्रमुखले धारणा राख्नु हुँदैन ।'
नेकपाका सांसद नारदमुनि रानाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि ठोरीको विषय राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको बताए । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन भन्दै अभिव्यक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै रामको विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा पुरातत्त्व विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
सांसद सरलाकुमारी यादवले प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाएपछि त्यसलाई पुरातत्त्व विभागले उत्खनन गर्दै अध्ययन अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७७ १८:५१